Ukuphupha uKaufmann ➡ ➡️ Ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Umrhwebi lixesha eliqhelekileyo lomntu othengisa ekuthengweni nasekuthengisweni kwempahla. Esi sihloko somsebenzi sele sikhona kumaXesha Aphakathi kwaye umrhwebi wayeyinxalenye yodidi oluphezulu loluntu. Namhlanje, nangona kunjalo, igama lomrhwebi libanzi kakhulu kwaye alisaphelelanga kurhwebo lokuthengisa.
Nokuba ungunobhala webhanki okanye unobhala weofisi, urhwebo olugcweleyo kunye nomabhalane kurhwebo lwangaphandle okanye umqeshwa wasemashishini, icandelo lezorhwebo namhlanje linikezela ngamathuba amaninzi okusebenza kwicandelo lezoqoqosho. Apha, uqeqesho lomthengisi kunye nemisebenzi yalo lusondele kumthengisi weklasikhi wamaxesha angaphambili. Ukhathalela uku-odolwa, ukugcinwa kunye nokuboniswa ngokuchanekileyo kokuthengiswa kwempahla, ukuya nokucebisa abathengi bakhe kwaye aqinisekise ukuba amashishini aqhuba kakuhle enkosi kwizakhono zakhe zentlalo nezoqoqosho.
Ukutolika kwephupha kulitolika njani iphupha apho ujongene nosomashishini okanye nawe ngokwakho, unokufunda oku kulandelayo.
1 Uphawu lwephupha «usomashishini» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «usomashishini» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «usomashishini» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «usomashishini» - ukutolikwa ngokubanzi
Kwakhona emaphupheni nasekuchazeni ngokubanzi amaphupha, uphawu lwephupha "usomashishini" lunento yokwenza norhwebo. Ukuba ubona usomashishini ngaphakathi el mundo yamaphupha akho, unokusebenza kunye ngokwakho. Inzuzo ubala xa kufikwa kwisitokhwe kunye nothethathethwano.
Oku kuyasebenza ukuba ukuphupha ngokwakhe kuthethathethwano nosomashishini. Apha ubonakalisa izakhono zothethathethwano eziyimfuneko kwaye unokulindela iziphumo ezonelisayo. Ukuba umntu ophuphayo ungusomashishini ephupheni lakho, unokucinga ngenye ukuzimela mva okanye sele usendleleni elungileyo eya kwinkululeko.
Ukuba oosomashishini abaliqela bavela kunye kumsitho wephupha, omnye ubhengezwa ngokungqinelana nokutolikwa kwephupha. intetho okanye intlanganiso nabantu ababalulekileyo. Oku kunokuhambelana nenqanaba leshishini, kodwa kunye nobomi babucala babo baphuphayo.
Ukuba umntu ekubhekiswa kuye ufumana iposi evela kumrhwebi, kufanelekile ukuba bakhathazeke kakhulu ngabo Imbopheleleko kuba oku kunokubandakanya amatyala angekahlawulwa kwaye anokuhlawulwa kungekudala.
Uphawu lwephupha «usomashishini» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba lokuchazwa kwengqondo kwamaphupha, "usomashishini" umfanekiso wephupha ufuzisela iimvakalelo kunye nezomoya. xabiso yokuphupha. Nokuba nezinto zakhe? Ngaba utyekele ekubaweni okanye ekuzingceni?
Iimeko ezichanekileyo zokuphila kwephupha apha zilukhokelo olubalulekileyo ekuchazeni ngokuchanekileyo iphupha elo. Kusenokwenzeka ukuba kubekho ukungalingani phakathi kokupha nokwamkela. Umntu ekuthethwa ngaye kufuneka ngokuqinisekileyo akukhanyise oku kwaye azibuze.
Ukuphupha usomashishini kungabonisa ukuba xa uphupha uthanda ukuba kulo ukutshintshiselana ukunye nabanye abantu kwaye uyathanda ukwabelana ngolwazi lwakho kunye neetalente zabo kunye nabo. Unamandla amakhulu okomoya kwaye ke unokubonelela ngenkxaso yokomoya kwabanye abantu ukuba imeko ifuna njalo.
Uphawu lwephupha «usomashishini» - ukutolika kokomoya
Usomashishini njengophawu lwephupha ufumaneka ekutolikeni ngokwasemoyeni kwephupha le Intabalala okanye isiphene kubomi bamaphupha. Ukuba uhlala eyazi intabalala yokomoya ngokwakhe, kuya kuba lula kuye ukuba asebenzise amandla akhe kwabanye abantu.
Ukuba, ngokuchaseneyo, uziva uswele, uya kuhlala ezama ukufumana amandla akhe kwabanye abantu.